China KZ Series Petrochemical Process Pump Presentation mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
Ity paompy andian-dahatsoratra ity dia mety hamindra ny rano maloto na maloto mandoto na tsy manalefaka nefa tsy misy sombina matanjaka. Ity paompy andiany ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovan-tsolika, indostria petrokimika, indostrian'ny simika, fanodinana arintany, indostrian'ny taratasy, indostrian'ny ranomasina,
indostrian'ny herinaratra, sakafo sns.
fahafaha Q: 0,5 ~ 3000m3 / h
Head H: 4 ~ 230m
Fanerena ny asa (p): ny sanda farany ambony dia mety ho 7.5MPa.
Sahan'asa (t): -45 ~ + 400
Fitsipika famolavolana API610 th8 / th9 / th10 / th11
Ity paompy andian-dahatsoratra ity dia mety hamindra madio na maloto maloto tsy miandany na maivana ranoka manimba tsy misy sombiny mivaingana. Ity paompy andiany ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovana menaka, indostrian'ny petrochemical, indostrian'ny simika, fanodinana arintany, indostrian'ny taratasy, indostrian'ny ranomasina indostrian'ny herinaratra, sakafo, farmasia, fiarovana ny tontolo iainana sns.
Ny paompin-tsolika empira petrochemical KZA dia mifanaraka amin'ny fenitra AOI610 ka misy fika sasantsasany eto ambany:
1) Ny firafitry ny paompy dia azo ianteherana sy azo antoka ary tsy azo antoka ny asan'ny paompy.
2) Ny fahombiazan'ny paompy amin'ny salan'isa dia avo miaraka amin'ny fitehirizana angovo ambany.
3) Ny fahombiazan'ny rongony paompy dia tsara ary tsara lavitra noho ireo vokatra mitovy aminy izy io. Ny sanda rongony farany ambany dia mety ho 0,5m amin'ny vokatra marobe, mandritra izany fotoana izany dia manodidina ny 1m ny sandan'ny NPSHr amin'ny vokatra ankapobeny. Ny ambany NPSHr dia midika fametrahana paompy ambany ka ny paompy KZA dia midika hoe ambany ny vidin'ny fananganana.
4) Ny sakany fampisehoana paompy dia malalaka ary ny fahaiza-manao faratampony dia mety ho 3000m3 / h ary ny lohany ambony indrindra dia mety ho 230m, mandritra izany fotoana izany, mihidy ny fahaizan'ny paompy sy ny lohany ka mora ny mifidy paompy.
5) Misy endrika fitondra mangatsiaka telo, fihenan'ny rivotra, fihenan'ny rivotra ary fanamafisana ny rano arakaraka ny hafanan'ny asa-paompy samihafa. Ny fanamafisana ny mpankafy indrindra dia mety amin'ny faritra tsy fisian'ny rano madio.
6) Avo lenta ny fanara-penitra sy ny oniversite. Ankoatry ny singa mahazatra mahazatra, ny impeller sy ny vatana mitondra ny KZA sy ny KZE dia azo atakalo.
7) Ny paompy mando faritra dia voafantina avy amin'ny fenitra API arakaraka ny toetran'ny asa na ny mpanjifa.
8) Open impeller koa dia natao ho an'ity paompy andian-dahatsoratra ity ho an'ny toe-javatra iasana.
Nahazo mari-pahaizana momba ny kalitao ISO9001 ny orinasanay Ary misy rafitra fanaraha-maso kalitao henjana mandritra ny famolavolana sy ny paompy ka azo antoka ny kalitao.
Fampisehoana an-tsehatra: Fahazoana Q = 0,5 ~ 3000m3 / h, Loha H = 4 ~ 230m
Fanerena ny asa (p): mety ho 2,5MPa (mifandraika amin'ny mari-pana ara-materialy sy aseho toa ny sary PT)
Sahan'asa (t): -45 ~ + 180
Hafainganam-pandeha (n): 2950r / min ary 1475r / min
Ity paompy andian-dahatsoratra ity dia mety hamindra ny rano maloto na maloto mandoto na tsy manalefaka nefa tsy misy sombina matanjaka. Ity paompy andiany ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovana solika, indostrian'ny petrokimia, indostrian'ny simika, fanodinana arintany, indostrian'ny taratasy, indostrian'ny ranomasina, indostrian'ny herinaratra, sakafo, farmasia, fiarovana ny tontolo iainana sns.
KZE, KZEF Petrochemcial centrocugal pump pump dia aseho araka ny API610 ka misy fiasa vitsivitsy etsy ambany:
Performance range: Q Q = 0,5 ~ 3000m3 / h, Loha H = 4 ~ 230m
Fanerena ny asa (p): KZE 2,5MPa KZEF 7.5MPa (mifandraika amin'ny mari-pana ara-pitaovana sy ny asa, aseho amin'ny sary PT)
Teo aloha: VCP Series Turbine Pump Pump
Manaraka: Paompy fanodinana indostrialy simika KCZ Series